Qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira? - Ayyaantuu News
Qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira? Abdii Boruutiin | Onkoloolessa 14, 2012
Dubbistootni barruu kanaa waayee kana hin beekan yookaanis isaaniif kun haaraa dha jedhee otuu hin taane, barreeffama kanaaf seensa akka ta’an, mee gaafiilee tokko tokkon kaasa. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) maali? Oromoon maaliif qabsaa’aa jira? Maal barbaada ykn galiin Oromoon barbaadu maali? Karaa feeneen haa ilaallu; yaada fi ilaalcha feenes haa qabaannu; wanti hundi keenya irratti walii galuu dandeenyu, uummatni Oromoo bilisummaa fi biyya isaa humnaan dhabee; gabrummaa Habashaa jalatti akka kufe fi har’as gabrummaa kana keessa akka jiru; gabrummaan har’aa ammoo kan dur caalaa hamaa akka ta’ee dha jedheen yaada, amanas. Oromoo ta’ee kan dhugaa kanatti hin amanne yoo jiraate, kun karaa lamaan ilaalamuu ni danda’a. Inni tokko, seenaas ta’ee waayee ofii kan hin beekne; kan dammaqinsa hin qabne yoo ta’u; inni biraa otuu waa hundaa beekuu fi hubatuu, kan diina fi alagaarratti rarra’uu fi kaayyoo dhuunfaa qabatee isa kanaaf dursa kennu dha. Yoo dhugaa kanaa olitti ibsame kanarratti waliigalame ammoo, kaayyoon QBO inni guddaan, gabaabumatti ibsuuf, bilisummaa fi abbaabiyyummaa humnaan dhabe sana deebisee argachuu dha. Akkamitti kana deebisee argataan ykn akkamitti galii hawwu gahaan gaafii biraa ti. Gaafii kanatti otuu hin ceene dura, kaayyoo isa guddaa kanarratti waliigaluun waan filannoo hin qabne dha. Kaayyoo kanatti amanuu fi kanarratti waliigaluun dirqama Oromummaa ti. Tokkummaan kaayyoo guddaa kanaaf hin uumamnes, ijaaramullee tokkummaa dhugaa ta’uu hin danda’u. Fedhii fi kaayyoo uummata ykn saba ofiitu akka tokkooman nama taasisa. Dhimma waliitu walitti nama fidee akka tokkooman nama godha. Tokkummaan kaayyoo ykn dhimma tokkoof ijaaramus tokkummaa fedhii otuu hin taane tokkummaa dirqamaa ti. Namni kaayyoo tokko qabu, isa kana galiin gahuuf tokkummaadhaan hojjechuun dirqama ta’a jechuu dha.
9 comments - What do you think? Posted by admin - 14/10/2012 at 8:19 pm Categories:
9 Responses to “Qabsoon bilisummaa Oromoo garamitti deemaa jira?”
obsaa says:	15/10/2012 at 2:38 am	Kabajamaa barreessaa barruu kanaa, galatoomi. Hojii jabaa eegalte kana illee akkuma siif dandaa’ametti ittifufiinsaan nuuf gumaachi.
Sababiin laafina/dadhabina QBO hedduu ta’uu mala. Garuu iddoo 2tti qoodnee ilaaluu dandeenya:
a) Rakkoo Keessaa- Rakkina Oromotomaan uumaman
– Galma irratti waliigaltee dhabuu
– Amantii fi gandaan walqooduu
– Faayidaa dhuunfaaf jecha qabsoo gatuu
– dammaqinsi ummanni Oromoo waa’ee siyaasaa qabu amma illee baay’ee xiqqoo ta’uu (kunis ilmaan oromoo amma illee barumsa ammayyaa sirriitti argachaa akka hinjirre mul’isa)
b) Rakkoo duubaa
– Biyyootni guddatan faayidaa isaaniif jecha diinota keenya wajjin hiriiruu isaanii
– Biyyoonni ollaa fayidaa isaaniif jecha diinota keenya wajjin hiriiruu isaanii
1. Ummanni hundi walfaana ka’ee akka qabsaa’uu hin’eegamu. Kanaaf gareen galma QBO tokko irratti waliigalan “active”ta’anii QBO finiinsuu yoo eegalan battalatti ummanni duubaan deeggaruu dandaa’a. Kanaaf qaamni “initiative” fudhatee ibidda qabsiisuu barbaachisaa dha.
2. QBO galma jijjiruu utuu hintaane tooftaa fi tarsiimoo bara wajjin adeemu irratti xiyyeeffatee adeemuu qaba. Fknf. Humna meeshaalee waraanaa nuuf kennu/nutti gurguruu yoo dhabne warruma diina keenyaaf loltuu taane qawwee isaaniitiin isaan loluu dandeenya. Qawwee dhabnus meeshaalee uumamaa ka akka ibiddaatiin dhaabbata isaanii mancaasuu dandeenya.
Kumsaa says:	15/10/2012 at 3:54 am	Obbo Abdii, nageenyi haa dursu. Waan gaarii, yaada nama yaachisu, nama jajjabeessu barreessite. Yoon galatoomi siin jedhe waanan dogoggore natti hin fakkaatu. Dhuguma, rakkoo guddaatu jira. Rakkoon kun immoo rakkoodhuma ilmaan Oromoo walitti fidde. Krrssaayyuu warra bayee biyya guddate jiraatu, warra waayee bilisummaa sirriitti beeku. Warra biyya guddate argee akkamitti akka uummanni tokko guddachuu dandaye beeku. Ummanni Oromoo biyya keessa jiru, warra siyaasaa oofaa jiru yoo taye malee, waan hundanuu tokkuma. Sabaa himaalee qabaatee waayee addunyaa kanaa arguufi dhagawuu baatus, namni eenyumaa ofiitti amaneetuma jiraata. Otoo hoogganaa, nama dura bu’ee lolee lolchiisu argatee akka warra baradhe jedhee waan hin taane keessa galee dhiiga lammii isaatin daldaluu otoo hin taane, eenyumaa isaa, hegeree isaa bilisa baasuf, akkuma lolee Xaaliyaanii biyyasii (Toophiyaadhaa) baasetti diinas of keessaa baasayyu ture. Naannoo hundatti uummanni aadaa isaa deefataati jira. Diinni hardha isaan bulchuu dandeesses ilmaanuma Oromootti fayyadamteeti malee qotee bultoota keenya gowwuumsitee miti. Waan yeroo sana Daaccee Goobanaa uummata Oromoorra qaqqabsiise baadiyyaanuu sirriitti beeka. Rakkoon guddaan garuu isa warri uummanni abdate deebi’ee wal qoodee deebi’ee bilisummaa uummataatti gufuu taye. Jaroonni adaraa biyyaa fudhatanii, kaayyoo dhiigni nama meeqaa dhangala’eef irraa goranii, hardha waayee tokkummaa Toophiyaa, waayee “federalizimii” maalii, maalii inni jedhan bu’aa waan buusu natti hin fakkaanne.
Namichi tokko “ginbot-7′ keessaa, inni Amiin Junadiin faa wajjin kaatan tokko, yoo gaafii-
“Yoo filmaata darbe irratti Afaan Oromoo Afaan Amaaraa wajjin wal qixxaateti hojjata jettanii akkamitti hamma “Biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko.” jettanii dubbattu?” jedhamee dhiyaatef, “Yeroo sana gowwoomsinee sagalee isaanii argachuuf malee akkas tawuu hin dandawu.” jedhe.
Ofumaaf wal tuffachiifna.
Duraan dursanii kaayyoo ABO duraatin deemutu namarra tureeyyu. “Uummata Oromoo waanjoo garbummaa jalaa baasuu.” sana booda murtee biraa ,eenyu faana akka jiraannu, akkamitti akka jiraannu, eenyu nu haa bulchu kkf.
Biyyoonni gugurdatan nu jibbanii otoo hin taane, akka lammii (saba) biraatti itti iyyanee rakkina uummata keenyaa biraan waan hin geenyefuu, akkamitti nu gargaaruu dandawu?
Warri ollaas sanuma.
Mammakis Oromoo tokko jira=-
“Yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata.” jedhu.
Ameerikaas tayee biyyoonni kaan namuma (dhaabuma) humna qabu gargaaru.
Kana waan tayeefuu, wal ganuu dhiifnee, tokkummaan kaanee, akkuma dandeettii keenyatti uummata keenya gargaarree seera hardha irra jiru jijjiiruu barbaachisa. Yoo callisnee teenyee warruma uummata addadda qoodee diina gargaaru qofa komanne, nutis waan callisnee teenyefuu, seenaa hegeree fuunduratti ittuma gaafatamna.
tolashe irra says:	15/10/2012 at 7:11 am	Obbo Borru,
Galatoomi xinxalakee kanaaf. Waan Atti jette siridha. Hundumtuu waan nutokomsissuu irratti waaliin dhabachudha qaba. Yeroofi wan heedunn dadaffe waan jijirama jiruuf ciisuun Oromo kuun nubaleesuf yoo tahee malee kan biraa mitti. AKanee wal haa cimsinuu.
Tuluu says:	15/10/2012 at 11:08 am	Abdiii Boruu galatoomi.
xiinxala gaari dha. WMO irratti shakki/mormii qabdu haala “civilized’ ta’een ibsite. Anis akkuma kee ilma Oromoo tokkummaa oromootti amanu tokko malee garee kamiyyu hin jibbu/mormu. haata’u garuu WMO fi warra jijjiramaa bara 2008 walitti fiduun doggoggora guddaa dha.
1-WMO toftaa haaraa marii irratti hundaa’uun (uumata marii’achiisuun) galii wayitti ba’uuf kan deemu malee garee tokko keessaa buqa’ee garee kan biroo irratti duuluuf miti
2- WMO gandaan wal ijaaree Oromoo gandaan qooduuf waan dalage tokko hin qabu
3-WMO akka warra jijjiramaa ija dunuunfatee ji’a 6 ykn 3 keessatti oromiyaa biliisomsa hin jenne. dhugaa lafa jiru waan sirritti beekuuf uumata sobaa hin jiru.
4- WMO qalbii oromoo kan hawaate waan xixiqoo yeroof mira namaa kakaasan dhihessuun miti. kana kjechuun, WMO Mooraan qabsoo Oromoo tasgabaa’uu qabdi, kanaaf mariitu barbaachisaa yedhee yeroo fudhatuun uummata mar’iiachisaa jira. kunimmoo yaada eebbifamaa kan Oromoon baroota dheeraaf dheebochaa ture dha.
Waluumaa galatti namoonni ykn gareen kamiyyuu WMO fi warra jijjiramaa walitti fiduu yookaan tokko godhaanii ilaalan warra dhugaa QBO keessa jirtu takkaa sirreetti hin beekne yoookanimmoo warra ilaalcha gartummaan ijjisaanii jaamee of(dhaaba keessa jiran) irraa dabarsanii waabiroo ilaaluu hin dandeenye qofaa dha. Akka ilaalcha kiyyaatti WMO kana rakkoo walxaxaa keessa jirru ilaalee waaqatu/rabbitu nuuf uume. Waaqa oromoo waaqa garraamii! galatoomi
Abdii Boruu says:	15/10/2012 at 1:26 pm	Duraan dursee yaada dhiyeessitaniif hundi keessanuu galatoomaa.
Tokkoffaa, “…WMO irratti shakkii/mormii qabdu…” kan jette, jecha “mormii” jedhu keessaa baasuu qabda. Akkuman barreeffama kiyya keessatti ibse, ani WMO tiin hin mormu nan deeggaras, hin deeggarus hin jenne. Mee kunoo barreeffama kiyya keessaa isa kana ilaali: •	“…Duraan dursee, wantin dubbistoota barreeffama kanaa hubachiisuu barbaadu, ani akka nama tokkootti, akka ilma Oromoo tokkootti, warra WMO jedhan kana deeggaruufis ta’ee balaaleffachuuf miti…”
Lammaffaa, “…WMO fi warra jijjiramaa bara 2008 walitti fiduun doggoggora guddaa dha…” kan jetteef, qabiyyee barreeffama kiyyaa waan sirriitti hubatte natti hin fakkaatu. Ani HAALA yeroo sana (2008) uumamee ture fi amma deemaa jiru kana walbira qabee ilaaluf malee, WMO fi warra jijjiiramaa (KY ABO) yeroo sanaa akka jaarmayootaatti ilaalee walitti fiduufii miti. Akkan hubadhutti WMO ammaaf jaaarmayaa ykn dhaaba natti hin fakkaatan. Kanaaf akka jaarmayaatti walbira qabanii ilaaluun dogoggora ta’uu danda’a. Waayee kanaafis mee kunoo isa kana ilaali:
•	“…Mooyxannoo sanarraa ka’ee yoon hubadu, adeemsi ammaa kunis (kan warra WMO), akkuma yeroo sana “jijjiirama” jedhame, har’a ammoo “mul’ata haaraa” jedhanii qalbii uummata keenyaa harkisuuf yoo ta’e malee, mul’atni haaraan kun waan adda ta’e tokko ni argamsiisa jedhee yaaduun na rakkisaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf, shakkii qabun ibsuu barbaade malee jara kana hamilee isaanii cabsuufii miti…”
Kunis shakkii ibsuu dha malee, mormii agarsiisuu miti. Mariin godhamu deeggaramuu qaba malee ittiin mormuun sirrii miti. Kanaafis kunoo:
•	“…Bakkuma fedhettuu, eenyu wajjinuu haa ta’u, marii godhuun waan badaa miti. Mariirraa waa baayeetu madda. Hubachuu fi wal hubachiisuunillee mariirraa argama…”
Mee hubadhu, kun mormii agarsiisuu dhaa?
Dhumarratti, “Waluumaa galatti namoonni ykn gareen kamiyyuu WMO fi warra jijjiramaa walitti fiduu yookaan tokko godhaanii ilaalan warra dhugaa QBO keessa jirtu takkaa sirreetti hin beekne yoookanimmoo warra ilaalcha gartummaan ijjisaanii jaamee of(dhaaba keessa jiran) irraa dabarsanii waabiroo ilaaluu hin dandeenye qofaa dha.” fi “Akka ilaalcha kiyyaatti WMO kana rakkoo walxaxaa keessa jirru ilaalee waaqatu/rabbitu nuuf uume. Waaqa oromoo waaqa garraamii!”
kan jetteef, WMOs ta’ee kan biroo raajeffachuun mirga keeti. Isaaniif dhaabbattee mormuunis akkasuma. Haa ta’u malee, namootni biroos akkuma kee yaada isaanii dhiyeessuudhaan WMO fi gareelee biroo walbira qabanii yoo ilaalan ykn kan ilaalan ta’e, kunis mirga isaanii ti. Garuu, isaan kun warra dhugaa QBO keessa jirtu hin beekne ykn warra… ijjisaanii jaame jechuun kee sirrii natti hin fakkaatu. Kan biraa, WMO waaqatu/rabbit nuuf uume kan jetteef, waaqni/rabbi isaan uume ammas hojii gaarii isaan dalagsiisee; akka bu’aa tokko nuuf argamsiisan isaan haa gargaaru jedheen yaada koo xumura. Nagaatti
Jiruu Barii says:	16/10/2012 at 1:35 pm	Akkaataa Wayyaaneen Oromiyaa keessatti caasaa ishii diriirfatte yeroo heddu irra deddebi’anii barreessitoonni fi beektotni Oromoo nu hubachiisaniiru. Kan maatii shan shaniin addaan nu qoodanii nu to’achaa fi nu gabroomfataa jiran wallaalaa keenyatti dhimma bawuuni.
Nuti immoo faallaa kanaa kan ta’e beektota keenyatti dhimma bawuun warra diinaaf ergaman kana bakka dhaloota keenyaatti deebinee addaan baafnee beekuu qabna. Warra gorsaan deebi’uu danda’an gorsuu fi daba Wayyaaneen dhala Oromoo, qabeenya Oromoo (bishaan, bosona, albuuda fi kkf.) irraan gayaa jirtu hubachiisuu dha. Warra dide immoo tarkaanfii irratti fudhachuu malee falli biraa hin jiru.
Akkana yeroon jedhu gandummaa leellisuuf miti. Haaluma keessa jirrutu kana nu dirqisiisa. Waan hunda caala immoo isa Wayyaneen alagoota Afaan Oromoo beekan OPDO jettee maqaa Oromootiin ummata keenya isa hin baratiin dogoggorsitu kanatu akka akkasitti yaadnu nu dirqisiisa.
Gubbaa dhaa warri hooggana kennu dirqiidhaan gandaan gurmaawuu hin qaban. QBOn bara dheeraa keessa ilmaan Oromoo wal barsiiseera. Ani kanin jechaa jiru caasaa (bottom up) ykn. grassroots asii ol ta’e ijaaruu qabna.
Ossanaa Bungul says:	18/10/2012 at 12:50 pm	Oromoon wali isaa irratti malee diina isaa irratti qabsaa’ee furmaata argachuuf yaaliin inni godhaa ture hoogganota harroota dantaa mataa isheef olii fi gadi fiigaa turteen daandii irraa maqee jira. Kanaaf qabsoon garamitti deemaa jira kan jetteefi; Garamittuu adeemaa hin jiru. Qabsoon qabsoo haa ta’uuf hoogganni haaraan; gootni dhugaan biyya keessaa; ummata keessaa ka’uu qaban jedha. Kanaaf qabsoo hin jirreef if hin dhamaasinaa!!
Fedhessa says:	14/06/2013 at 8:15 am	Duran dursee galatoomin sin jedha,jechi ati dubbatte baay’ee natti tole akkuma ati jette tokkummaan keenya baay’ee murteessadha.kana ta’uu baannan diinaaf karaa bana.kanas akka tokko hin taane kan godhu kan waa’ee oromummaa isaa hin beekne ykn kan jiraachuf jecha warra diinaa wajjin ta’u jedhen yaada malee kan oromoo tahe kan oromummaa isaatin dhaadatu kana ni godha jedhee hin amanu.Ammas taanan qawwaa diinatti cufuun kaayyoo cimaa ta’uu qaba.
Fedhessa says:	14/06/2013 at 8:18 am	Yaa ummata oromoo tokkummaaaaaaaaaaaaaa wal haa taanu.